Fahaiza-mitantana : tsy mahita anilihana andraikitra momba ny pesta ny mpitondra | NewsMada
Fahaiza-mitantana : tsy mahita anilihana andraikitra momba ny pesta ny mpitondra
Tsy mahita anilihana andraikitra toy ny mahazatra azy ny mpitondra, hany ka mifanenjika an-toerana sisa? Mitondra faisana ny vahoaka amin’izao fihanaky ny valanaretina pesta izao: matimaty foana, mangarohoro sy mitebiteby; eny, na eo aza ny kazarana fanafody fampitoniana toy ny kabary, fampitandremana…
Iza no tena tomponandraikitra? Tsy lavina, vokatry ny loto ny aretina: manana adidy amin’ny fanadiovana ny isam-batan’olona, isan-tokantrano… Na izany aza, tsy afa-bela amin’izao ny tomponandraikitra isan-tsehatra sy isan’ambaratonga ary ny fanjakana foibe na toy inona filaza sy fanamarinan-tena na fanilihana andraikitra.
Natao hitsinjo mialoha izay mety hitranga hatrany ny hoe mitondra, na inona na inona izany. Efa mpiseho isan-taona fa tsy fongana tanteraka ny pesta, nefa tsy mampiraika. Mbola tsy manohintohina ny toerana sy ny tombontsoa manokana? Nisy ny vahiny maty tsy azo nafenina sy manala baraka, vao nikoropaka.
Tsy afa-manoatra ny vahoaka
Iza no tompanandraikitra amin’ny fivangongoan’ny fako tsy voaroaka ara-potoana, ohatra? Asaina manadio tanàna ny olona ifotony, nefa tsy raofina araka ny tokony ho izy ny fako. Ekena koa, manana andraikitra amin’ny tsy fielezan’izany ny vahoaka, fa tsy azy intsony ny mandraoka izany any amin’ny tobim-pako
Iza koa no tomponandraikitra amin’ny fandraisana an-tanana ny marary, indrindra ny tsy ielezan’ny aretina? Misy izay tandrify ny vahoaka: ny fanatonana tobim-pahasalamana, tsy fifampikasohana amin’ny marary… Tompon’antoka voalohany ny mpitondra. Tena voafehy ve ny valanaretina amin’izao?
Mitombo hatrany ny marary sy maty
Tsy mitsaha-mitombo ny marary, na hoe mihena aza ny isan’ny maty. Mitombo ny sekoly voatery akatona. Iza no anilihana andraikitra? Mbola mahavita ny mpitondra matoa tsy misy mametra-pialana amin’izao, na eo aza ny fisavoritahana: fampitoniana ny vahoaka, na hita izao aza fa tsy voafehy ny aretina; ifanilihana ny fanadiovana tanàna…
Tsy mahita anilihana andraikitra amin’izany ny mpitondra, na minia manao bemarenina… Tsy vitavita ho azy toy ny tondra-drano, haintany, “Raharaha Soamahamanina“… Rahoviana vao hanaovana fanambarana fa latsaka an-katerena ny firenena? Mila atao raharaham-pirenena maika amin’izay ny ady amin’ny pesta, rehefa tsy hita izay anilihana ny tsy fahombiazana.